राष्ट्रियसभाका १७ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएपनि तत्काल घोषणा नहुने, कोको भिड्दैछन् चुनावमा ? « News24 : Premium News Channel
राष्ट्रियसभाका १७ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएपनि तत्काल घोषणा नहुने, कोको भिड्दैछन् चुनावमा ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका ५६ मध्ये १७ जना सांसदहरु बुधबार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । आगामी माघ २४ गते हुने मतदानबाट निर्वाचित हुनुपर्ने बाँकी ३९ सांसदका लागि भने २४ गते एकल संक्रमणीय विधिबाट मतदान हुनेछ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि बुधबार भएको मनोनयन दर्ताकै क्रममा १७ जना निर्विरोध बनेका हुन् । बुधबार सातवटै प्रदेशमा गरी कुल ८३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
उम्मेदवारी दर्ता भएका मध्ये प्रदेश १, २, ५ र ७ मा केही सांसदहरु निर्विरोध बनेका छन् भने प्रदेश ३, ४ र ६ मा पूरै ८/ ८ वटै सिटमा चुनाव हुनेछ ।
को(को भए निर्विरोध रु
प्रदेश ७ बाट भने खुला र महिलातर्फ ३र३ सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । दलित र अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक सिटका लागि चुनाव हुनेछ ।